व्यापार, परियोजना व्यवस्थापन
निर्माण उद्योग को संगठन - सम्वन्धि गतिविधिहरु सहित एक सेट:
विभिन्न प्रकारका काम को लागि तयारी को प्रणाली।
परिभाषा र सामान्य काम, आफ्नो प्राथमिकता र कोसेढुङ्गामा को पूरा को प्रवर्तन।
को चिल्लो कार्यका लागि आवश्यक निर्माण को सबै प्रदान स्रोत प्रकार। आफ्नो उपस्थिति सम्भव पूरा बनाउँछ निर्माण कार्य सही गति मा र उच्च गुणवत्ता संग।
सिद्धान्त को एक बिट
वाक्यांश "निर्माण उद्योग को संगठन" एकजुट कि विषय विषयहरूका अत्यन्तै व्यापक छ। छुट्टै लेखमा यो यहाँ आगमन कार्य गरेर बतान गर्न असम्भव छ। तपाईं यो धेरै ठूलो स्ट्रोक बनाउन प्रयास भने, यहाँ प्रश्न निर्माण साइट को विकल्प संग जोडिएको समस्या हुनुपर्छ, विकास परियोजना प्रदान निर्मित सामान्य ठेकेदार को वस्तु, चयन भइरहेको निर्माण पर्यवेक्षण काम गुणस्तर को।
भवन उत्पादन को संगठन - उपाय एक जटिल, कार्यान्वयन जो इच्छित परिणाम achieves। तिनीहरूले अपेक्षित गुणस्तर संग एक समय तरिका सञ्चालन प्रवेश गर्न छ erected।
उत्पादन निर्माण को संगठन सुविधाहरु को निर्माण को लागि हस्ताक्षर अनुबंध अन्तर्गत दायित्व पूरा सुनिश्चित गर्न, प्राविधिक प्राविधिक र संगठनात्मक समाधान, साथै उपाय लक्षित सुनिश्चित implies। कि stipulated समयमा सञ्चालन मा र भन्नुभयो भवन को सहभागीहरू को, आर्थिक औद्योगिक, आर्थिक र अन्य गतिविधिलाई अनुपालन मा आवश्यक गुण आफ्नो परिचय छ। यी समावेश:
संगठन निर्माण र निर्माण, ठेकेदार।
संगठन अनुसन्धान र विकास संलग्न।
व्यवहार मा प्रयोग निर्माण को संगठन, को तरिका, निर्माण प्रक्रियाको अभिन्न भागहरु, एक प्रवाह विधि, उत्पादित समग्र जब प्रक्रिया विभाजन गर्न सकिन्छ सम्बन्धित कदम मा विभिन्न टोली प्रदर्शन गर्न तोकिएको छ कुन, (जग, यन्त्र पर्खाल र टी। पी को निर्माण)। यी अवस्थाहरूमा, साइटमा काम तुरुन्तै अघिल्लो भवन पूरा भएपछि यसरी काम निरन्तर चक्र प्राप्त हुन्छ। मुख्य विधि हो:
संगठन विधि मा-लाइन भनिन्छ;
निर्माण परियोजनाहरूको चक्र;
को पहिले द्वारा संकलित अनुसार, निर्माण र स्थापना गर्न attributable हो कि काम को कार्यान्वयन नेटवर्क तालिका।
उत्पादन (आधारभूत तत्व) निर्माण को संगठन को आधारमा:
डिजाइन को एक सेट समावेश जो सुविधा, को निर्माण मा काम गर्दछ उत्पादन प्रक्रिया, निर्माण साइटमा बाहिर छन् जो। निर्माण प्रक्रियाको वास्तविक प्रविधि र यो उत्पादन को संगठन: यो दुई आधारभूत subsystems हुन्छन्। यी subsystems प्रत्येक यसको आफ्नै वैज्ञानिक आधार र यसको आफ्नै सार छ।
यी काम को उत्पादन डिजाइन।
तथाकथित मा विधि को परिचय।
निर्माण उद्योग को संगठनको लागि वैज्ञानिक आधार र अनुसन्धान र participatory डिजाइन को प्रकृति मा खण्डमा। यो ठाउँ र समय, मा सम्बन्ध निर्माण प्रक्रिया परिभाषित परिचालन व्यवस्थापन र यसको आफ्नै उत्पादन को योजना।
परामर्श - यो के हो? एक व्यवस्थापन र वित्तीय परामर्श के हो?
काम को पदानुक्रमित संरचना: अवधारणा र उद्देश्य। परियोजना व्यवस्थापन
व्यापार मा रणनीति को प्रकार। प्रकार र उद्यम विकास रणनीति
Shewhart Deming-चक्र उत्पादन कदम को व्यवस्थापन
व्यापार प्रक्रिया - यो के हो? डिजाइन, सिमुलेशन, व्यापार प्रक्रिया को अनुकूलन
एकल मान्छे। मुकाबला एकाकीपनको
भिटामिन, छोराछोरीलाई लागि क्याल्सियम: जो एक राम्रो छ?
"Nazivin संवेदनशील" स्प्रे: पुस्तिका, analogues, contraindications
यो जोकर जस्तो देखिन्छ? आफ्नै हात अनुरूप
लाइनर "कोस्टा Diadem": सुविधा र फोटो
प्याज खाल मा बेकन कसरी खाना पकाउनु
खरबुजा को गुण। शरीर लाभ र हानि
आफ्नो कम्प्युटरमा चालक कसरी स्थापना गर्ने?